गाडी कम्पनीहरुले दिँदैछन् क्विक मर्मत सेवा, सर्भिस सेन्टर अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने होड :: BIZMANDU
गाडी कम्पनीहरुले दिँदैछन् क्विक मर्मत सेवा, सर्भिस सेन्टर अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने होड
प्रकाशित मिति: Jan 26, 2018 1:10 PM
काठमाडौं। तपाईंको गाडी सर्भिसिङ गर्नुछ? कतै गाडी बिग्रिएर अलपत्र पर्नुभएको छ? उपत्यकाभित्रका टाटा र हुण्डाईका ग्राहकहरुले अब २ घण्टामै सामान्य मर्मत सेवा लिन सक्नेछन्।
हुण्डाइको अधिकृत विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र टाटाको अधिकृत विक्रेता सिप्रदीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्भिस सेन्टर काठमाडौंमा खोल्ने भएपछि सवारी धनीले यस्तो सुविधा लिन पाउने भएका हुन्।
गाडी सर्भिसिङ सेन्टरमा लैजाने बित्तिकै एडभाइजरले समस्याबारे सोधपुछ गरी गाडी सर्भिस हलमा लैजान्छन्। तपाईंले गाडी सर्भिसिङ गराउँदै गर्दा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरको प्रतिक्षालयमा चिसो तातो पेय पदार्थका साथै निशुल्क खाजाको ब्यबस्था समेत कम्पनीले मिलाउने छ।
गाडी मर्मतका लागि मोवाइल सर्भिसिङ दिँदै आएका ती कम्पनीले अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भिसिङ सेन्टरमार्फत 'क्विक सर्भिस' दिने बताएका छन्। गाडी सर्भिसिङमा लानु अघि ग्राहकले समय लिनुपर्नेछ।
सामान्य सर्भिसिङकालागि सर्भिस सेन्टरले दिएको समयमा ग्राहकले एकदेखि दुई घण्टा समय छुट्याएर जानुपर्नेछ भने इन्जिन मर्मतका लागि सर्भिस सेन्टरमै गाडी छोड्नुपर्ने बताइएको छ।
यस्तो छ हुण्डाइको कार केयर एक्सप्रेस
हुण्डाइको अधिकृत विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले तीनकुनेस्थित आधुनिक सर्भिस सेन्टर बनाएको छ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीमा सर्भिस सेन्टर निर्माण गरिएको सहायक महाप्रबन्धक दिपक थपलियाले बताए। 'क्विक सर्भिस मोडालिटी' अन्तर्गत कम्पनीले यो सर्भिस सेन्टर निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए। । उनका अनुसार ग्राहकले हुण्डाइ कार केयर एक्सप्रेसमा फागुनदेखि 'फ्रि नर्मल सर्भिसिङ' गर्न सक्नेछन्।
ग्राहकको सन्तुष्टिको लागि भिन्न तरिकाले सर्भिस दिने उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए। 'हुण्डाइ कार केयर एक्सप्रेसमा गाडीको सामान्य मर्मत हुन्छ। सवारीधनीले एकदेखि दुई घण्टामा कार वास, इन्जिन आयल रिप्लेस, टायर रोटेसन, ब्याट्री टेस्ट, वाइपर ब्लेड रिप्लेसमेन्ट लगायतका सुविधा लिन सक्छन्,' उनले भने, 'गाडीमा सामान्य समस्या आउँदा ग्राहकले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकको समय र खर्च कम गराउने उद्देश्यले हामीले क्विक सर्भिस मोडालिटी ल्याएका हौँ । क्विक सर्भिस सेन्टरमा सामान्य मर्मत मात्र हुन्छन्।'
ग्राहकले हुण्डाइ कार केयर एक्सप्रेस आउनु अघि नै जानकारी गराउनुपर्ने र कम्पनीले समय तोकिदिने उनले बताए। क्विक सर्भिसका लागि प्रत्येक 'लिफ्ट'मा लागि दुईजना दक्ष प्राविधिक रहने उनले बताए। अहिले हुण्डाइ कार केयर एक्सप्रेसमा पाँचवटा लिफ्ट छन्।
यहाँ अधिकांश काम प्रविधिले नै गर्छ। 'टोटल क्विक सर्भिस ट्रली', प्रत्येक लिफ्टमा डिस्पेन्सरसहित जिडिएस मोवाइल एप्लिकेसन, टायर सोलुसन लगायतका अटोमाइज्ड टुल्स राखिएको उनले जानकारी दिए। टोटल क्विक सर्भिस ट्रली कन्सेप्ट नेपालमै पहिलो पटक रहेको थपलियाको दाबी छ।
सर्भिस सेन्टरमा करिब चार हजार स्कावर फिटको वर्कसप एरिया, १५ सय स्क्वाएर फिटमा स्पेयर पार्ट्स, १५ सय स्क्वाएर फिटमा कस्टमर वेटिङ एरिया र लगभग ३ हजार स्क्वायर फिटमा पार्किङ क्षेत्र राखिएको छ। कम्पनीले काठमाडौंको थप क्षेत्रमा पनि हुण्डाइ कार केयर एक्सप्रेस बिस्तार गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए।
कम्पनीको धापासी, कुपण्डोल, बानेश्वर, सिनामंगल लगायत चारवटा सर्भिसिङ सेन्टर छन्।
सिप्रदीको अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर
टाटा मोटर्सको अधिकृत विक्रेता सिप्रदीले धोबीघाटमा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर खोल्ने भएको छ। ग्राहकलाई फरक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिनका लागि उक्त सर्भिस सेन्टर खोल्न लागिएको प्रविधि प्रबन्धक कुमार भण्डारीले जानकारी दिए। सर्भिस सेन्टरको ९० प्रतिशत काम सकिसकेको र फेब्रुअरीको अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको छ।
९ रोपनी क्षेत्रफलमा ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको सर्भिस सेन्टरमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट गाडी मर्मत गर्न सकिन्छ। कमर्सियल वर्कसपसहितको सिप्रदी सर्भिस सेन्टरमा १२ वटा ‘बे’ ( गाडी राखेर मर्मत गर्ने लिफ्ट) छन्। १० वटा ‘टु पोस्ट लिफ्ट’ छन् भने एउटा 'फोर पोस्ट लिफ्ट' छ। एक पटकमा यो सर्भिसिङ सेन्टरमा १२ वटा टाटाको कार मर्मत गरिन्छ।
‘बे’ वरपर जिडीएस मोवाइल एप्लिकेसनलगायतका आवश्यक उपकरणसहितको अत्याधुनिक ट्रली छन्। ट्रलीको सहायताले थोरै प्राविधिकले धेरै काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
सामान्यतया एउटा लिफ्टमा एकजना मिस्त्री हुन्छन भने जटिल काममा क्षणिक रुपमा तीनजनासम्म मिस्त्री लाग्ने उनले बताए। 'इन्जिन निकाल्नका लागि छुट्टै लिफ्ट राखिएको छ। लिफ्टमा इन्जिन राखिन्छ र ‘हाड्रोलिक अपरेटेड’ भएर मर्मत कक्षमा लगिन्छ,' उनले भने।
भण्डारीका अनुसार टायर रोटेसन, मोविल चेन्ज, कार वासलगायतका समान्य सर्भिसका लागि एकदेखि दुई घण्टा लाग्नेछ भने इन्जिन मर्मतका लागि अधिक्तम ६० घण्टा लाग्ने उनले बताए।
उनले भने 'गाडीको हेरचाह र मानिसको स्वास्थ्य हेरचाह उस्तै हो, हामीले गाडी मर्मत गर्ने एग्रिगेट रुम (अपरेशन थिएटर) आधुनिक उपकरणसहितको २६ फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइको कोठा बनाएका छौँ। यसमा आकस्मिक सेवालाई मुख्य प्राथमिकता दिइन्छ।'
उनका अनुसार सर्भिस सेन्टरमा डेनपेन्टबाहेक मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल सर्भिस सुविधा दिइनेछ। बाटोमा गाडी बिग्रिएको अवस्थामा सिप्रदी सर्भिसिङ सेन्टरले र्‍याकर अथवा आफ्नै मोबाइल भ्यानको सहयोगले ल्याउन गरेको उनी बताउँछन्।
यी सबै सुविधाका लागि कम्पनीले ग्राहकसँग नियमित शुल्क मात्रै लिने उनले बताए। यो सर्भिसिङ सेन्टरमार्फत छोटो समयमा धेरै ग्राहकलाई सेवा दिन सकिने उनले बताए। सर्भिस सेन्टरमा १२ जना अट्ने लक्जरियस वेटिङ रुम छ।
देशभर सिप्रदीको २४ वटा सर्भिसिङ सेन्टर छन्। काठमाडौँमा भने सिप्रदीको सोल्टीमोड र बालकुमारीमा दुईवटा आफ्नै सोरुम रहेको छ भने शंखमुल र सानेपामा दुईवटा आधिकारिक सोरुम छ।
गाडी कम्पनीहरुले दिँदैछन् क्विक मर्मत सेवा, सर्भिस सेन्टर अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने होड को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।